Isticmaal WhatsApp adoo adeegsanaya API > Vielhuber David
Isticmaal WhatsApp adoo adeegsanaya API10
In kasta oo dhammaan welwelka laga qabo ilaalinta xogta, WhatsApp wali waa barnaamijka farriinta ee Jarmalku jecel yahay. Marka lagu daro barnaamijka gaarka ah ee Ganacsiga WhatsApp , Facebook wuxuu sidoo kale abuuray interface rasmi ah, WhatsApp Business API, si ay uga dhigto mid xiiso badan shirkadaha. Haddii aad rabto inaad u dirto farriimaha WhatsApp barnaamij ahaan barnaamijkaaga shabakadda, waxaa jira siyaabo kale sidoo kale.
Wadada rasmiga ah waxay maraysaa WhatsApp Business API: Haddii aad rabto inaad tan toos u adeegsato, waa inaad iska diiwaangelisaa mid ka mid ah bixiyeyaasha rasmiga ah ee shabakadda lamaanaha . MessageBird , tusaale ahaan, halkan ayey isku caddeysay . Anigoon u galin faahfaahinta saxda ah, waxaan ku tusi doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee halkan lagu qaato:
Shuruud ahaan, waxaad u baahan tahay lambar taleefan gacmeed Jarmal sax ah oo ku xiran ugu yaraan qorshe xog WhatsApp ah.
Diritaanka farriimaha waxay kuxirantahay xayiraad adag: U dirida xiriirada dibada waxaa kaliya oo suurtogal ah iyadoo la adeegsanayo waxa loogu yeero moobillada fariinta , oo ay tahay in la soo gudbiyo lana ansixiyo gacanta. Haddii xiriirku ka jawaabo, waxaad u diri kartaa farriin qoraal ah xiriirkan adoo adeegsanaya API gudahood daaqad ahaan 24 saacadood.
Waxaad ubaahantahay ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo xiriir ah, oo ay tahay inaad adigu iskaa uqabsato.
Khidmadaha laga helo bixiyaha-saddexaad wuxuu sabab u yahay farriin kasta oo la soo diro.
Wicitaanka dhabta ah ee API ee tusaalaha MessageBird (oo gacan ka helaya _curl ka stringhelper ) wuxuu noqdaa mid fudud:
Haddii aad haysatid adeege u gaar ah iyo taleefanka gacanta (oo aan si firfircoon loo isticmaalin), waxaa kale oo jira hab kale oo lagu gaaro waxa aad rabto oo aad uga gudubto xayiraadaha kor ku xusan. Halkan waxaad ku adeegsanaysaa shaqeynta WhatsApp Web . Labada maktabadood ee soo socda ayaa loo isticmaali karaa ujeedkan.
Duubista WebWhatsapp-ka ayaa soo jirtay muddo aad u fog waxayna sidoo kale ku saleysan tahay Python iyo Selenium. Diritaanka fariimaha waxay u shaqeysaa sida soo socota, tusaale ahaan:
Baileys-ka aadka u dhuuban , dhinaca kale, wuxuu ku saleysan yahay TypeScript iyo WebSockets. Farriimaha waxaa loo diraa iyadoo la adeegsanayo lambarka soo socda tusaale ahaan:
Labada maktabadoodba waxay ku shaqeeyaan mabda 'isku mid ah: abka webka ayaa meel fog laga xukumaa, xaqiijinta ayaa loo baahan yahay hal mar oo kaliya (fadhiga dib ayaa loo soo celiyaa marka xigta ee la yiraahdo). Ma jiraan wax xaddidaad ah (marka loo barbar dhigo dirista farriinta caadiga ah).